Paster 34 गर्भावस्था हप्ता सपनाको मुटु
तेस्रो अध्ययन ती खराबी पहिचान गर्न आवश्यक छ, जुन आफैलाई गर्भावस्थाको दिनमा मात्र प्रकट हुन्छ।
थप, थप अध्ययन (Doppler, ह्युपेटोपोग्रावेश) भ्रुण, विकास ढिलाइको प्रकृति, हाइपोक्सकको उपस्थिति मूल्यांकन गर्न। helplements 34 हप्ताको पुन: निर्माण गर्न परिवर्तनहरू र इन्ट्राटेक संक्रमण, बेवकूफ अवधि र प्रख्यात अवधि र प्रबंधित एक जटिलताको लागि महत्त्वपूर्ण को डिग्री को डिग्री निर्धारित।
Chardiakokocroguolग (CTG) भ्रुण मुटुको दर फ्रिक्वेन्सीको कार्यान्वयन गर्ने विधि हो र उनीहरूको परिवर्तनहरू गर्भाशयको कटौतीमा निर्भर गर्दछ, को गतिविधि फेटस आफै वा बाह्य उत्तेजनाको कार्य।
यो अध्ययन गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकमा साथसाथै मात्र गरिएको छ।
भ्रुणको मुटु गतिविधि विशेष अल्ट्रासोनिक सेन्सर द्वारा रेकर्ड गरिएको छ, जुन भ्रुणको मुटुको मुटुको शुभकामना हो।
अल्ट्रासोसन सर्तहरू भ्रुणको मुटुबाट प्रतिबिम्बित हुन्छ सेन्सरबाट उत्पन्न हुन्छ र सेन्सरबाट फेरि प्राप्त हुन्छ।
इलेक्ट्रोनिक प्रणालीले भ्रुणको मुटुको निहुरा फ्रेंजर्स ट्रेन्स बिचको संक्षिप्तमा अन्तराल वार्तालाप वर्गीहरूको बीचको परिवर्तन गर्दछ, अध्ययनको समयमा प्रति मिनेट झटकाहरूको संख्या गणना गरिन्छ।
हाल, कार्डियोटोकिटोकोमिला भ्रुणको राज्यको एक विस्तृत मूल्या ation ्कनको अभिन्न अंग भएको छ। केकजीको लागि धन्यवाद, निदानका सम्भाव्यताहरूले गर्भवती र श्रमका सम्भावना दुबैलाई उल्लेखनीय विस्तार गर्दै छन्, जसले गर्दा उनीहरूको मर्मतसम्भारको तर्कसंगत युक्तिहरूको मुद्दाहरूको समाधान गर्न सम्भव छ।
CTG गर्भावस्थाको 320 हप्ता भन्दा पहिले ctg सञ्चालन गर्नुहोस्, यो यस समयमा कि यो यस समयमा हो कि यो कार्डियस गतिविधि बीचको सम्बन्ध गठन भइरहेको छ, जसले कार्यक्षमता प्रतिबिम्बित गर्दछ यसको केन्द्रीय स्नायु, मांसपेशि र कार्डियोवस्कुलर प्रणालीहरूको।
गर्भावस्थाको .22 औंस द्वारा, सक्रिय राज्यको औसत अवधि 500 ​​मिनेट, र शान्त - 20--300 मिनेट।
doppler / doppler / doppller जलम्बक म्यापिंगहरू भ्रुण जहाजहरू, डोमिलिक जहाजहरू र गर्भाशयमा रगत प्रवाहको अध्ययन हो।
dopholrogragy को नतीजा शाही र विचलन र फलफूलको रगतको न्याय गर्न सम्भव बनाउँदछ र अप्रत्यक्ष रूपमा बच्चाको इंट्राइटरस्ट्रन्टिकन राज्यको न्याय गर्न सम्भव छ।
गर्भानी रगतको प्रवाहको बारेमा विश्वसनीय जानकारी 20 देखि 21 हप्ता सम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ।
गर्भाशय-प्लेटन्ट फलफूल प्रणालीको बिभिन्न विभागहरूमा रक्त प्रवाह विकारहरूको उपस्थितिलाई अस्पताल लगायतका विभिन्न विभागहरूमा कडा गतिशील नियन्त्रण आवश्यक पर्दछ।
रूसी संघको सामाजिक विकासको सिफारिसका सिफारिस अनुसार <<
अनुसार गर्भवतीमा जन्मजात र वंशानुगत रोगहरूको समयमै जन्मपूर्व निदानलाई सर्तमा तीन-समय अल्ट्रासाउन्ड परीक्षाको लागि आवश्यक छ। 11 - 1 14, 20-24 र 300 - 34 हप्ता। यो अल्ट्रासाउन्ड स्क्रीनिंग अनिवार्य छ। (रसिया नम्बर 45 457) को स्वास्थ्य र सामाजिक विकासको अनुरुप।
पहिले नै गर्भावस्थाको weeks 34 हप्ता पहिले नै कदम चालेको छ। बच्चा अलि बढेको छ, र मेमी अधिक र अधिक गाह्रो हुन्छ। प्रत्येक हप्ता संग, लामो तत्काल बैठक आउँदैछ, सायद तपाईंले प्रसूति अस्पताल र जन्म लिने एक डाक्टर को छनौट मा निर्णय गरिसक्नु भएको छ। यदि तपाईं सहयोगी बच्चाको जन्म योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईंलाई कुनै बुबा सर्वेक्षणको आवश्यकता छ भने पत्ता लगाउनुहोस्।
बेल्सी अब आमालाई सजिलो बनाउँदैन, पहिले जस्तो सजीलो सार्नुहोस्। तर अब यो तपाईलाई पर्याप्त गतिविधि चाहिन्छ, ताजा जन्ममा हिंड्नुहोस् - आगामी जन्महरू अघि तपाईंले शक्ति प्राप्त गर्नुपर्नेछ, मांसपेशी प्रणालीलाई सुदृढ पार्नुहोस्। तर एकै साथ यसलाई अधिक नबनाउनुहोस्, सकारात्मक पुस्तकहरू पढ्न क्षमता प्रयोग गर्नुहोस्, संगीतको कुरा सुन्नुहोस्, हाम्रो सनसनमा परिवर्तनहरू मजा लिनुहोस्।
weeven 34 हप्ता गर्भावस्था - कति महिना? आठ र आधा ओब्स्टेट्रिक महिना बितिसकेको छ, र यो थोरै रहन्छ! आमाले आफ्नो तौल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ, यो शब्दलाई 11-12 किलोग्राम थप गर्न अनुमति दिइन्छ। डाईटको क्यालोरी सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, जबकि आवश्यक कम्पोनेन्टहरूको रसीद अपेक्षित सुनिश्चित गर्दछ, ट्रेस तत्वहरू, भिटामिनहरू।
गर्भावस्था434, 35 35 हप्ता सबै अ organs ्ग र प्रणालीहरूको निरन्तर सुधार द्वारा विशेषता हो। बच्चाले तौल प्राप्त गर्न जारी राख्दछ, मुख्यतया Adipipos ऊतक को खर्च मा। यसको जटिल पहिले नै नवजात नै हो जस्तै।
छाला अधिक र चिल्लो हुँदै गइरहेको छ, बच्चाको शरीरमा फ्लोश कपालको संख्या पहिले नै कम हुन सक्छ। तर टाउकोमा हेयरपिसहरू, यसको विपरित सबै बाक्लो छन्। पहिले नै पूर्ण रूपले न nails हरू गठन गरियो। हड्डी प्रणालीको पाकेको जारी छ, र बच्चालाई अब धेरै क्याल्सियम चाहिन्छ।
तपाईंलाई चाहिएको सबैले आमाको शरीरबाट आमालाई लिन सक्दछ, त्यसैले सबै पोषक तत्वहरूको आगमनलाई हेरचाह गर्नु आवश्यक छ।
बच्चा जन्माइसकेको बच्चा जन्माउने काम उनको लागि 34 हप्ताको years 34 हप्ताको लागि खतरनाक छैन। यसको विशेष उपकरणहरू बिना पनि धेरै जसो केसहरूमा वयस्कर प्रणाली सक्षम छ, तर अझै पनि सर्फरनको इच्छित संख्यामा गठन गर्नुपर्दछ।
सामान्यतया, बच्चाले गर्भावस्थाको यस अवधिमा अन्तिम स्थान लिएको छ। सब भन्दा बिरामी शिर पूर्वावलोकन - बच्चाको यो स्थिति, जसमा टाउकोको जेनेरिक पथमा आउँदछ, र यो जेनेरिक मार्गहरूमार्फत पाइन्छ। योनीको बच्चा जन्मको साथ, यो बच्चा र आमाको लागि सबैभन्दा सुरक्षित छ।
यदि तपाईंलाई from 34 गर्भधारणको पुजारीमा निदान गरियो भने, यसको मतलब यो हो कि बच्चाको गम वा खुट्टा अब जेनेरिक मार्गहरू भन्दा माथि अवस्थित छ। यो अझै पनी स्वतन्त्र रूपमा स्थिति परिवर्तन गर्न सम्भव छ, कहिलेकाँही विशेष बोधहरू समात्छन्, बच्चालाई उल्टाउन मद्दत गर्दछन्। यो आवश्यक छ कि, पूर्ण परीक्षा पछि डाक्टर परिभाषित गर्दछ।
गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकले गर्जनुक्रमको सक्रिय चरण द्वारा विशेषता हो। अब मुटुबेताट फ्रिक्वेन्सी वयस्क जत्तिकै दुई गुणा बढी हुन्छ। जान्दछु, कुन स्थितिमा बच्चा अवस्थित छ, आमाले सजिलैसँग स्टुथेस्कोपलाई पेटमा संलग्न गर्न सक्दछ र सुन्नुहोस्।
गर्भावस्थाको यस हप्ता शुरू गर्दै, बच्चाको जन्म अकाल मानिन्छ र आधिकारिक रूपमा तालिकाको अगाडि जन्मन्छ।
गर्भावस्थाको 34 बर्षमा जन्मेको, बच्चा भन्दा फरक छ जुन शब्दमा देखा पर्यो, अपर्याप्त subcutaneoughout Towot फाइबर फाइबर।
बोसोको अभावका कारण बच्चाको शरीर तातो कायम गर्न सक्षम छैन। यसैले यस अवधिमा बच्चाहरु न्यानो वातावरणको सर्तमा राखिएको छ।
को लागी बच्चा जन्मको घटना भन्दा पहिले आधा र कच्चा-जस्तो लुब्रिन्टको मात्रा बढ्छ, जुन जेनेरिक पथहरू द्वारा भ्रुणको उन्नति गर्न सैकिलो ग्रंथिहरू द्वारा उत्पादन गरिन्छ। ।
34 साप्ताहिक गर्भावस्था भनेको निम्न उपलब्धिहरु द्वारा विशेषता हो: भ्रुणको वजन 2.3-2.4 किलोग्राम, बृद्धि443--44 सेन्टिमिटर हो। बच्चाले तौल प्राप्त गर्न, बढ्न र विकसित गर्न जारी छ। उसको निकायले गर्भाशयमा एक निश्चित स्थान लिएको छ, जुन सम्भवतः जन्मदानको लागि सुरक्षित हुनेछ। बच्चाको अनुहार र शरीर गोलाकार र सुन्दर हुन्छ।
बच्चाको छाला छैन रातो, तर गुलाबी रंग छ। कपाल र मार्फल्ड बढ्न जारी छ। अधिकांश अंगहरू र प्रणालीहरूको गठन पूरा भएको छ। एक अपवाद श्वासप्रश्वास प्रणाली हो: फोक्सोमा सरोफाखन्ट संचय जारी रहन्छ, पदार्थ पहिलो सास फेर्न आवश्यक छ। यो एक सर्फक्डेटल हो जुन एलिभिलसलाई अनुमति दिँदैन, जुन ब्रोन्चिओलको अन्त्यमा सानो झोला जस्तो देखिन्छ।
Pancreas र कलेजोको विकास जारी छ। यी अंगहरूले आमाको दुधको साथ नवजातको जीवमा प्रवेश गर्ने पौष्टिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्न योगदान पुर्याउँछन्। कलेजोले विषाक्त पदार्थहरूलाई कीटाणुनाशक गर्नको लागि प्रकार्य ग्रहण गर्दछ, जहाँ शरीरबाट मिर्गौला र पाचन प्रणालीको तल्लो पाचन द्वारा हटाइन्छ। मांसपेशीहरू, हड्डीहरूको संयुक्त मा विपत्ति बढाउन जारी छ।
यदि डाक्टरको गर्भावस्था रहेको खण्डमा द्विशुखिक परीक्षणलाई आवश्यक गतिविधि मूल्यांकन गर्न तोकिएको छ।
परीक्षण परिणामहरू अनुसार (0 देखि2सम्म मापन), पाँच महत्त्वपूर्ण प्यारामिटरहरू अनुमान गरिएको छ: मुटुको दर, टोन, टोनप्राइज को आवागमन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन, टोन बालामन को आवागमन।
यो परीक्षण अल्ट्रासोनिक उपकरणको संलग्नताका साथ प्रदर्शन गरिएको छ, जुन पानी जम्मा गर्ने रकम द्वारा अनुमान गरिएको छ, श्वासप्रश्वासको सवालमा र भ्रुपस सार्दै।
मुटुको दर स्पष्ट गर्न, बाह्य मोनिटरहरू प्रयोग गरिन्छ। भ्रुणको मोटर गतिविधिसँग सम्बन्धित मुटुको दरमा परिवर्तनहरू पनि छ।
भ्रुण टोन अल्ट्रान्डमा यसको चरम पदार्थहरू सार्न निदान गरिन्छ। बायोप्सिलिक परीक्षणको नतीजा अन्य अध्ययनका सूचकहरूसँग सामिल छन्।
एक बायोपेजिकल टेस्ट सबै गर्भवती महिलालाई नियुक्त गरिएको छ, तर अन्तिम अल्ट्रासाउन्ड सर्वेक्षण आवश्यक छ। यो भ्रुणको पुनर् निर्धारण गर्न आवश्यक छ, प्लेसेन्टाको संलग्नताको स्थापना गर्न आवश्यक छ। साथै, पछिल्लो मितिमा अल्ट्रासेन्डन्डले तपाईंलाई गर्भपनात्मक डोरीको भ्रुण पहिचान गर्न र प्लेसेन्टको परिपक्वताको डिग्री स्थापित गर्न अनुमति दिन्छ। भ्रुणको नतीजाका अनुसार भ्रुणहरूको परिणाम (टाउकोको व्यास, फेमोल हड्डी, आदि) को लम्बाई) डाक्टरले बच्चाको वजन निर्धारण गर्दछ।
विगतका लागि यस्तै नास्टलजिया एकदम गठन हुन्छ, किनकि तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा गर्भवती महिलाको अंश अर्थपूर्ण हुन्छ।
यदि पहिलो हप्तामा, बान्डीको बिरामी हमलाका बिरामीहरूको अवधारणामा, कमसेकम उनीसँग सम्मिलित हुन सक्छिन्।
प्रमुख, 34-यदेल गर्भावस्था यस्तो "उपहार", निदाएको जटिलता। प्राय: सपनाको मोड र बच्चाको मोडसँग मेल खाँदैन, र सक्रिय हर्षोलहरू एक महिला सुत्ने इच्छाले तल झर्छन्। अधिक धेरै ठूलो छ कि कुनै पनि हल्का छ कि हल्का प्रदर्शन महसुस भएको छ।
सुत्न पहिले नै चम्किरहेको छ।
। सबै शुद्ध व्यक्तिगत तिनीहरूलाई पूर्वानुमानमा निर्भर गर्दछ। ईन्स्टेन्स योग्य जनहरू जब सम्पूर्ण गर्भावस्थाको लागि भविष्य हुन्छ, सफेक्शनको लागि, सजीलो र सजीलो पारित। यसको बारेमा एक दुर्लभ अपवाद हो।